Cabdixakiin Dhooba-daarood oo isu sharaxay gudoomiyaha baarlamanka Puntland (Dhegeyso) – Radio Daljir
Cabdixakiin Dhooba-daarood oo isu sharaxay gudoomiyaha baarlamanka Puntland (Dhegeyso)
Janaayo 2, 2014 4:09 b 0
Garoowe, January 2, 2014 – Baarlamanka cusub ee Puntland ayaa bilaabay fadhiyadoodii caadiga ahaa iyagoo ku mashquulsan dejinta xeerarka shaqo ee xiliga doorashada iyo weliba doorashada gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeenno baarlaman oo la wada sugayo.
Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhooba-daarood) ayaa xalay shaaciyey in uu yahay musharax u taagan xilka gudoomiye ee baarlamanka Puntland, wuxuu tilmaamay in uu ku dhiirinayo hanashada xilkaas isagoo kalsooni buuxda qaba.
Dhooba-darood waa xubin ka tirsan gollaha wakiilada cusub ee baarlamanka Puntland.
?Waxaa loo baahan yahay hugaamiye baarlaman oo daacad ah, golluhu wuxuu u baahan yahay illaalinta iyo dhowrida dastuurka, golluhu wuxuu u baahan yahay la xisaabtan dhab ah oo lagu sameeyo hay?addaha dowladda.? Ayuu yiri Xildhibaan Dhooba-daarood.
Musharaxa u taagan xilka gudoomiyaha baarlamanka ayaa hadalkiisa ku daray ?Waxaan latashiyo badan la sameeyey bulshada dal iyo dibedba, kadib waxaan go?aansaday inaan u istaago aniga oo aamisan inaan ka soo bixi karo si hagar la?aan ah oo daacadnimo ku dheehan tahay.?
Baarlamanka cusub ee Puntland ayaa la filayaa sabtida inay yeeshaan kulan ay ku dooranayaan gudoomiye baarlaman ku xigeennadiisa iyo guddiga doorashada baarlamanka, xili ay aad u soo dhowaatay wakhtigii doorashada guud ee Puntland
Dhegeyso: – Maxamed Cali Axmed oo daljir ka tirsan ayaa war-bixin ka diyaariyey?
Baahin: Khamiis, 2 Jan 2014, Caawa Iyo Daljir Cabdirisaaq C Cabdi Silver~ Daljir ~ Galkacyo
RW Cabdiweli ?weerarkii hotel Jaziira wuxuu sii xoojin doono dagaalka lagula jiro Argagixisada?